मेरो मृत्यु पनि उत्सव बनोस्
पाँच सेकेन्डभन्दा बढी हेर्ने हिम्मत गर
ठ्याक्क तिमीतिर नियाल्ने हिम्मत आउँदैन आजकल। लामो सास फेर्छु अनि एक, दुई, तीन, चार, पाँच... मलाई थाहा छ, तिमीसँग पनि मलाई पाँच सेकेन्डभन्दा बेसी नियाल्ने हिम्मत छैन। तिमी आँखा घुमाइसक्छौ। आफ्नै दुनियाँमा मग्न भइसक्छौ र अब मेरो पालो तिमीलाई नियाल्ने।
अनि अझ रिस उठ्यो त्यो संवेगप्रति, जो तिमीसँग बोल्न चाहन्थ्यो र मलाई भनायो– ‘अस्ति माइकल फुको पढ्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईं। वस्तु र भावमा कुन महŒवपूर्ण ठान्नुहुन्छ ?’ ...आफ्नै शब्दबाट स्तब्ध थिएँ म, जब तिमीले उल्टै प्रश्न गरेथ्यौ– ‘तिमीलाई के लाग्छ ?’
सँगै लेखौँला अयोध्या र मक्काको बात
वालेकुम सलाम !
धेरै धेरै सम्झना !
शब्दमा चन्द्रबिन्दु त हाल्न नजान्ने म, आज तिम्रो मुटुलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर यो पत्र लेख्ने प्रयास गर्दै छु। लेख्न त, ‘तिमीबिना पनि खुशी नै छु म’ थियो, तर पत्र कलमको मसीले भिज्नुअगावै आँशुले भिज्न पुगेछ। यो सपना हराएको शहरमा नचाहेरै पनि साथ छोड्नैपर्ने रहेछ।
स्वतन्त्र भनिने नदी जसरी कैद छ, दुई किनारामा, त्यसै गरी प्रेमको स्वतन्त्रतालाई कैद गरिदिँदा रहेछन्, समाजका मौलवी, पण्डित र पादरीहरूले। यही स्वतन्त्र प्रेमको पिँजडाभित्रबाट एक कर्कस आवाज आवाज लेखिरहेछु, प्रश्न गरिरहेछु।
तिम्रो नाम सीता हुन्थ्यो वा मेरो नाम रसुल हुन्थ्यो भने सायद हामी एकअर्काका हुन्थ्यौँ। नुरा, न तिम्रो गल्ती थियो, न मेरै गल्ती थियो, न किस्मत नै मुजरिम थियो। बस, म हिन्दू थिएँ, तिमी मुस्लिम थियौ। तिम्रा मौलवीहरूको अल्लाह, मेरा पण्डितहरूको शंकर थियो, गीता–कुरानको अन्तर थियो। धर्ममा अन्धो यो संसार कसरी देख्थ्यो हाम्रो कञ्चन प्रेम। मन्दिर र मस्जिदको दूरीमा, आयात र श्लोकको उच्चारणमा गायब भइसकेको छ, प्रेम।
नुरा, याद छ त्यो दिन, हामीले एक फकिरको झोलीमा मात्र दुई रुपैयाँ हालिदिँदा उसले दिएको आशीर्वाद ? तिमीले भनेकी थियौ, ‘राम, महँगीको यो दुनियाँमा केही कुरा अझै पनि सस्तै रहेछन्।’ हो नुरा, यहाँ अझै केही कुरा सस्तै छन्। यहाँ सस्ता ज्ञान, सस्ता विचार मडराइरहेछन्। मलाई हाम्रो प्रेमले हामीलाई हिटलरको कन्सन्ट्रेसन क्याम्पमा झैँ कैद गर्न खोजिरहेका यी धर्मगुरुहरूलाई प्रेमको ज्ञान दिई एक पवित्र भक्तिभाव सिकाउने मन छ। किन बुझ्न सक्दैनन् उनीहरू कि हामी हाम्रो प्रेमले नास्तिकहरूको इलाकामा पनि हृदय मन्दिर, आत्मा भगवान् अनि प्रेम प्रार्थना हुने शहर बसाउन सक्छौँ। यो अन्धो संसार किन देख्दैन मेरो तस्बिर तिम्रा नयनमा जमेको, जो बगेन कहिल्यै आँशुका धाराले।
म अझै पनि हाम्रा पुराना दिन सम्झेर यादमा हराउने गर्छु। नुरा, रातको अँध्यारोले ढाकिएको यो जीवनको सूर्योदय थियौ तिमी। एक्लै हुँदा म सम्झिने गर्छु, तिम्रो मुहार, तिम्रो हिँडाइ, बसाइ, बोलीचाली, जान–ए–अदा। अझै पनि गुञ्जायमान छ, मेरो कानमा तिम्रो हाँसो। स्वयम्भूनाथ घुम्न गएको दिनको त्यो तिम्रो हाँसो यति मीठो लागेको थियो कि लालमोहन र बर्फी पनि त्यसको तुलनामा खल्लो–खल्लो लाग्त।
किन मैले नमाज पढ्न पाउँदिनँ ?
किन तिमीले पूजा गर्न पाउँदिनौ ?
किन कसैको प्रमाण जरुरी भएको छ ?
किन म तिम्रो, तिमी मेरो जुठो खान सक्दिनौ, पिउन सक्दिनौ ?
यो प्रेमपत्र तिमीलाई सम्बोधन गरे पनि, यो पत्र समाजका लागि पनि हो। यो पत्र अहिलेसम्म धर्मको पिँजडामा निस्सासिएका सबै राम–नुराहरूको एक सामूहिक विद्रोहको बिगुल पनि हो।
साँच्चिकैमा हिन्दू–मुस्लिम एक हुनु मन्जुर–ए–खुदा थिएन भने किन बच्छ ज्यान एकअर्काको रक्तदानमा ? पण्डित, मौलवी र पादरीका कानहरूमा यो कुरा पुर्‍याइनु जरुरी छ।
नुरा, तिमी हरबखत साथ नहुने हुनाले तिमीलाई यत्रतत्र छरेर राखेको छु। दोबाटोमा, हरेक गन्तव्यमा, आँगनका फूलहरूमा मैले तिमीलाई सजाएको छु। सजाएको छु तिम्रा स्मृतिहरू। हामी सँगै गएका मन्दिरका घण्टीहरूमा, बाँधेको छु तिम्रा स्मृतिहरू दर्गाहको त्यो धागोमा। पहिलो पटक तिमीलाई त्यो मस्जिद अगाडि बुर्कामा देखेको थिएँ। तिम्रा खैरा चम्किला आँखाहरू मेरो मुटुमै गाढिन पुगेका थिए।
अहिले म एक्लो छु। तिमी छैनौ मेरो साथमा। तर, एक विश्वासमा बाँचिरहेको छु। कुनै न कुनै दिन धर्म र जातभातका पर्खालहरू ढल्नेछन् र हामी एक हुनेछौँ।
नुरा, अबबाट म पशुपति जाँदा महादेवका लागि नमाज पढ्नेछु र माग्नेछु तिमीलाई हात फिँजाएर। तिमी जामे मस्जिदमा अल्लाहको लागि पढिदेऊ है, गीताका केही श्लोक, मलाई पाउने चाहना बन्द हातमा च्यापेर।
हामी बाच्ने संसारमा त सबैका नजरमा धर्मको मैलो चस्मा छ। छोडिदिम यो संसार र पु्गौँ अर्काे दुनियाँमा। जहाँ–
मन्दिरको आरती र मस्जिदको आजान एकै साथ
उर्दूमा गीता अनि संस्कृतमा कुरान अनुवाद
नुरा, तिमी रामकी हौ, राम नुराको हो।
हामी रामनुरा हौँ, नुराराम हौँ।
पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस, Mj123.mohit@gmail.com